Corn Exports Talks with Thailand in the Works | Myanmar Business Today
Home Business Local Corn Exports Talks with Thailand in the Works
Traders from Myanmar and Thailand are planning talks on corn exports following offers from the Thai side to buy up to 1 million tons of corn per year. The two sides hope to sign an agreement in early 2020.
Last year, Myanmar exported 700,000 tons of corn to Thailand.
“We will hold talks with Thailand in Naypyidaw on November 30 to sign MoU,” said U Khin Maung Lwing, Deputy Permanent Secretary for Commerce. “We used to export corn only to China. Now, there is corn demand from Thailand big enough to buy all of our corn supply.”
During the 2019 fiscal year, China halted corn imports from Myanmar, forcing the country to start looking for other markets. Subsequently, it started exporting corn to Thailand.
Myanmar earned $270 million from exporting 1.5 million tons of corn during fiscal year 2019, with 1.3 million tons going through border trade routes, according to data from the Ministry of Commerce.
There are 1.9 million acres of corn cultivation area in Shan State, Sagaing Region, Magway Region, Chin State, Karen State and Kayah State.
Myanmar’s corn exports totaled 1.3 million tons in the 2015 fiscal year, 1 million tons in 2016, 1.2 million tons in 2017 and 1.2 million tons in the 2018 fiscal year. The government and traders hope to see bigger corn production and exports in the future.
ထိုင်းသို့ တစ်နှစ်လုံး ပြောင်းတင်ပို့နိုင်ရန် ဆွေးနွေးမည်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ နှစ်ဖက်ကုန်သည်အကြား နားလည်မှှုစာချွန်လွှာအတိုင်း ပြောင်းတင်ပို့နိုင်ရန် ဆွေးနွေးနေသည်။ လာမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) ရေးထိုးရန် နှစ်ဖက်ပြောင်းကုန်သည်များနှင့်အတူ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က ဆောင်ရွက်နေုပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြောင်း တန်ချိန် ၁ သန်းအထိ ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်သမျှ ပြောင်းများကို ဝယ်ယူနိုင်သည့်အခြေအနေရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ု ပြောင်းတန်ချိန် ခုနှစ်သိန်းနီးပါးအထိ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ရာသီချိန်အပြင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးတင်ပို့နိုင်ပါက တန်ချိန် ၁ သန်းအထိ တင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်လွင်က ပြောသည်။
“ MoU ရေးထိုးနိုင်ဖို့ လာမယ့် ၃၀ ရက်နေ့ မှာ နေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်။ ပြောင်းကို အရင်က တရုတ်ကိုပဲ ပို့တယ်။ လက်ရှိထိုင်းက ပြောင်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်။ ထွက်သမျှကို ဝယ်နိုင်တဲ့ အနေအထားရှိတယ်” ဟု ဦးခင်မောင်လွင်က ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မြဝတီ-မဲဆောက် နယ်စပ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် တရားဝင်လမ်းကြောင်းဖြင့် တင်ပို့နေပြီး ၂၀၁၈ -၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်လုံးတွင် နယ်စပ်လမ်းကြောင်း မှ ပြောင်းတန်ချိန် ၁၃ သိန်းကျော်တင်ပို့ထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကုန်သွယ်မှုစာရင်းအရသိရသည်။
နယ်စပ်လမ်းကြောင်းနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ပြောင်းတန်ချိန် ၁ဒသမ၅ သန်းကျော်တင်ပို့ထားပြီး ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၇၀ ကျော်ရရှိထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ယခင်က ပြောင်းကို တရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုသာ တင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈-၁၉ တွင် တရုတ်မှ ပြောင်းဝယ်ယူမှုကန့်သတ်ပြီးနောက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ စတင် တင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံတွင် ပြောင်းစိုက်ဧက ၁ ဒသမ ၉ သန်းခန့်ရှိပြီး ရှမ်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကာ လက်ရှိတွင် ထိုင်းမှ ပြောင်းကုန်သည်များက နည်းပညာအကူအညီပေးလျက်ရှိသည်။
မြန်မာပြည်၏ နှစ်အလိုက်ပြောင်းတင်ပို့မှှုစာရင်းများအရ ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်ပြီး တိုးတက်လာရာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၃ သန်း ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တန် ၁ သန်း ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၂ သန်း ၊၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မကုန်မီအချိန်ထိ တန် ၁ ဒသမ ၂ သန်းတင်ပို့ထားပြီးဖြစ်သည်။ အထွက်နှုန်းလည်း နှစ်စဉ်တက်လာသည့်ပြောင်းကို ယခုထက်ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရန် ကုန်သည်နှင့် အစိုးရတို့ကမျှော်လင့်နေသည်။
Previous articleMandalay to Suspend SME Membership Application in December
Next articleFishery Industry Worried Human Trafficking Reports Will Harm Exports